Sele kunokwenzeka ukuba utyumle ikhompyuter usebenzisa iimolekyuli zeDNA | Iindaba zeGajethi
Kudala sazi ukuba kukho iqela lamaqela labaphandi abavela kwiiyunivesithi ezahlukeneyo abazama ukuphuhlisa itekhnoloji eyimfuneko ukuze abantu bathathe elinye inyathelo kumdla wabo wokugcina lonke ulwazi olunokwazi ukuvelisa kwaye, oku, sidinga ngokuzinzileyo gcina idatha kwiimolekyuli zeDNA. Okwangoku, njengoko uya kukhumbula ngokuqinisekileyo, kufezekisiwe gcina i-GIF kulwazi lwemfuzo enkosi ekusebenziseni ubuchule obaziwayo CRISPR-case.9.
Enye yeenkqubela phambili zamva nje ezenziwe ngabaphandi kwezi veki zisandula ukutyhilwa nge iphepha ipapashwe ngabantu abadumileyo Yunivesithi yaseWashington. Kolu xwebhu, olubhaliweyo nolupapashwe lelinye lawona maqela abo avelisayo, sifunda ukuba bakwazile Ukuqhekeza ikhompyuter usebenzisa i-deoxyribonucleic acid, into ekungekho mntu wayicinga ukuba inokwenzeka.
1 Abaphandi abavela kwiYunivesithi yaseWashington bayakwazi ukuqhekeza ikhompyuter besebenzisa imolekyuli yeDNA eyenziweyo
2 Iidola ezingama-89 zanele ukuba ulandelelwano lweDNA lwendalo oluthunyelwe ekhaya kuwe
3 Kuthatha kuphela iileta ezili-176 ngaphakathi kwetyathanga le-DNA ukuqhekeza ikhompyuter
Abaphandi abavela kwiYunivesithi yaseWashington bayakwazi ukuqhekeza ikhompyuter besebenzisa imolekyuli yeDNA eyenziweyo
Ukuya kwiinkcukacha ezithe kratya, kuba ukuphela komhlathi odlulileyo kuya kukushiya kubanda, ukukuxelela ukuba eli qela labaphandi likwazile ngokwenene ukwenza ikhowudi yenkqubo enobubi okanye isoftwe Kwisiqwenga esincinci sekhowudi yemfuza yokwenziwa, enomdla, njengomnye wabo banoxanduva lweprojekthi, izimvo, iqela lathenga kwivenkile ekwi-intanethi eyithumele kwidilesi yabucala IRandi ye89.
Nje ukuba le DNA yokwenziwa ithengwe kwi-intanethi ifike kubanini bayo abatsha, kuye kwafuneka basebenzise indlela yabo entsha kunye nendlela yokusebenza ukufumana le malware sele ikhankanyiwe kulandelelwano lwe-DNA ukuze kamva ifumane ngempumelelo zizame ikhompyutha. Kuyabonakala kwaye njengoko benxibelelana, onke amanyathelo alo msebenzi aya kuboniswa kwiveki ezayo ngexesha lokubhiyozela i I-Usenix Symposium yoKhuseleko eziza kwenzeka eVancouver (Canada).
Iidola ezingama-89 zanele ukuba ulandelelwano lweDNA lwendalo oluthunyelwe ekhaya kuwe
Okwangoku uyazibuza ukuba inokwenzeka njani le nto. Ngokucacileyo nangokutsho kwabo baphetheyo kolu vavanyo, umbono kukusebenzisa kanye indlela eyilwe ngayo iDNA.
Imolekyuli ye-DNA yaso nasiphi na isidalwa esiphilayo sineentlobo ezine zeziseko ze-nitrogen, ezaziwa ngcono njenge 'iileta', A yeadenine, G yeguanine, T ye-thymine, kunye no-C wecytosine. Ngale nto engqondweni, yitsho nje, ukuze ikhowudi isoftware enobungozi izazinzulu zenze itheyibhile yokulingana phakathi kwekhowudi yemfuza ngokwayo kunye nekhowudi yokubini yesoftware uqobo. Iziphumo zoku:
Enkosi ngale ndlela yokusebenza kwekhowudi enesiphumo emva kokuba ikhowudi ibiyi Ikhonkco elincinci leDNA elineeleta ezili-176 kuphela.
Kuthatha kuphela iileta ezili-176 ngaphakathi kwetyathanga le-DNA ukuqhekeza ikhompyuter
Nje ukuba isoftware ifakwe kwikhowudi ye-DNA, esi siqwenga safakwa kwikhompyuter esetyenziswa rhoqo yiYunivesithi yaseWashington ukwenza imali ngeDNA. Isiphumo seprojekthi, ngokwenza imali ikhonkco, yayikukuba abaphandi babenakho ukuqhekeza izixhobo. Njengoko kusengqiqweni kwaye kulindeleke, akunakulindeleka ukuba ngetyathanga lolu hlobo umntu anokonwaba ikhompyuter yakho ikude nangona, uvavanyo lokuqala lwempumelelo sele luphuhlisiwe kwaye lwenziwe.
Ndiyabulela kule projekthi kwaye ndinikwe ubungqina obukhulu bokungabikho kokhuseleko kule khompyuter, abaphandi, kuphando olutsha kuphando lwabo, bazimisele ukuqinisekisa ukhuseleko lweshumi elinantathu lweenkqubo ezisetyenziswayo xa kulandelelwa imixokelelwane ye-DNA elebhu. Iziphumo zolu phononongo yayikukusebenza uninzi lunokuba semngciphekweni wokhuselo ekufuneka ihlaziyiwe kwaye ihlolwe rhoqo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » isibulali » Ngoku kunokwenzeka ukuba uqhekeze ikhompyuter usebenzisa iimolekyuli zeDNA
ICanada yeBlackBerry Glass ijoyina ibhendi yezinto ezinxitywayo kwiinkampani